ဘီဘီစီ မြန်မာ တီဗီမှာ ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ သတင်းတွေအပြင် တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်တွေ တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BBC News မြန်မာ THsel channel ဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe လုပ်ထားပြီး နေ့စဉ် ပုံမှန် ရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။
48 146 682
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မြန်မာမှာ ကိုဗစ်၁၉ စတင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ တစ်ပတ်တာ - BBC News မြန်မာ
ရန်ကုန်ကို lockdown လုပ်သင့်လား - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပိုးရဲ့ မျိုးဗီဇကနေ အဖြေရှာနေတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်များ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်: ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ မေးမြန်းခန်း - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် : မန္တလေးက ဈေးတွေ အပိုင်းလိုက် စတင်ပိတ် - BBC News မြန်မာ
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံရသူ ၅ ဦးရှိလာ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာကာကွယ်ရေး ဒေါက်တာလော်ရယ် ဘာပြောလဲ - BBC News မြန်မာ
စစ်ဘေးရှောင် စခန်းက ခက်ခဲနေတဲ့ ဘဝများ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် : ထိုင်းပြန် အလုပ်သမားတွေနဲ့ မြဝတီ မြို့ခံတွေရဲ့ စိုးရိမ်မှု - BBC News မြန်မာ
မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ မျက်မှောက်ခေတ် စစ်အင်အားနဲ့ စစ်ရေးအတွေ့အကြုံ ဘယ်လိုရှိလဲ - BBC News မြန်မာ
မြန်မာပြည်နဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေး - BBC News မြန်မာ
မြစ်ကြီးနားက ကိုရိုနာဂယက် - BBC News မြန်မာ
ရခိုင်က ငိုကြွေးနေရတဲ့ မိန်းမများ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ထိခိုက်ရတဲ့ ငှက်ပျောခြံ အလုပ်သမားတွေ - BBC News မြန်မာ
ဗြိတိသျှနန်းလျာ ဝေလမင်းသား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် : လူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့ မန္တလေးမှာ စီမံချက်တွေချ - BBC News မြန်မာ
ဝမ်းစာရှာရင်း ဗုံးတွေ့သူတွေ - BBC News မြန်မာ
မန္တလေး ကျောက်ဝိုင်း ယာယီပိတ်သိမ်းပြီး ပြင်ဆင်ထားမှုအခြေအနေ - BBC News မြန်မာ
ကိုဗစ်၁၉-မှော်ဘီရှင်ဆေကိန္ဒကျောင်းတိုက်နောက်ဆုံးအခြေအနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ပြင်သစ်ရောက် မြန်မာတွေ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်နေလဲ - BBC News မြန်မာ
ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ရခိုင်မှာ လူမျိုးဘာသာ မရွေး ထိခိုက်နေ - BBC News မြန်မာ
စပိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကန့်သတ်မှုတွေ သက်တမ်းတိုး - BBC News မြန်မာ
မန္တလေးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် ဘယ်လို ပြင်ဆင်နေလဲ - BBC News မြန်မာ
ဧည့်လာများတဲ့ မဟာဂန္ဓာရုံမှာလည်း ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် ပြင်ဆင် - BBC News မြန်မာ
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ် ပိတ်လိုက်ပေမယ့် ဝင်လာသူတွေရှိဆဲ - BBC News မြန်မာ
"ဗုံးမိုးရွာနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ တိုက်ပွဲ လျှော့ဖို့ဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဘက် လိုဖြစ်နေတယ်" - BBC News မြန်မာ
ဘီဘီစီသတင်းထောက် ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့တဲ့ လှည်းကူး ကိုဗစ်-၁၉ စောင့်ကြည့် စင်တာ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သီးခြား ခွဲနေရာမှာ သိသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက် - BBC News မြန်မာ
တစ်ပတ်အတွင်း ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ - BBC News မြန်မာ
ကိုဗစ်-၁၉ လှည်းကူး စောင့်ကြည့်စင်တာက အခြေအနေ - BBC News မြန်မာ
အီတလီမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ တရုတ်ထက် များလာ - BBC News မြန်မာ
ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ ကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမလဲ - BBC News မြန်မာ
စပိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ တိုးလာ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ကျိုက်ထီးရိုးပိတ်လို့ ဝမ်းရေး ခက်သူတွေ - BBC News မြန်မာ
ပြည်တွင်းစစ်ဘေးသင့် ရခိုင်က ၁၀ တန်း ကျောင်းသား တစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟချက် - BBC News မြန်မာ
ရုရှားမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် နယ်စပ်ဝင်ပေါက်တွေပိတ် - BBC News မြန်မာ
ကျောက်တော် တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်၊ အရပ်သား ထိခိုက်မှု များပြား - BBC News မြန်မာ
COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ် စစ်တွေက ကျောင်းတွေစပိတ်ပြီ - BBC News မြန်မာ
ကိုဗစ်-၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို အန်တုနေကြသူများ - BBC News မြန်မာ
အမေရိကန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် ကန့်သတ်ချက်တွေ ထုတ်ပြန် - BBC News မြန်မာ
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု - နာမည်ထုတ်ဖော်ခဲ့သူတွေကို တရားစွဲမယ့် ကိစ္စ ဘယ်လို ရှိနေလဲ - BBC News မြန်မာ
စပိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့် ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေ စတင် - BBC News မြန်မာ
ရခိုင်စစ်ပွဲကြားက တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ - BBC News မြန်မာ
ကိုဗစ်-၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ - BBC News မြန်မာ
အမျိုးသမီးတွေအတွက် အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေ လိုအပ်နေပြီလား - BBC News မြန်မာ
ေျမာက္ဦးက စစ္ေရွာင္စခန္း ပစ္ခတ္မႈအတြင္း ေသဆုံးသူ ၆ ဦးရွိလာ - BBC News မြန်မာ
စစ်တပ်အာဏာ လျှော့ချဖို့ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး သီတင်းပတ် - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - ဒေါက်တာခင်ကျော်ပြောတဲ့ သိသင့်တဲ့ အချက်များ - BBC News မြန်မာ
မိုဘိုင်းဖုန်း အတွက် သီးသန့်ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ - BBC News မြန်မာ
အီတလီရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခြေအနေ - BBC News မြန်မာ
သတင်အမှားဖြန့်သူတေွကို ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမယ် - BBC News မြန်မာ
ပလက်ဝကူးတို့စက်လှေ ပစ်ခတ်ခံရမှု ခရီးသည်တစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ပြောပြချက် - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် - အီတလီက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အခြေအနေ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပြီ - BBC News မြန်မာ
၂၁ ရာစု ပင်လုံ ပြန်လည် ကျင်းပနိုင်တော့မလား - BBC News မြန်မာ
သမ္မတနဲ့ ကာလုံ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ချက် အဆို မအောင်မြင် - BBC News မြန်မာ
ပြင်ဆင်ချက် တစ်ခုမှ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေး ဒုတိယနေ့ - BBC News မြန်မာ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေ မူကြမ်း ဒီနေ့ လွှတ်တော်မှာ စတင် မဲပေး - BBC News မြန်မာ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်လဲ - BBC News မြန်မာ
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး ပထမနေ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ခုမှာ ၂ခုသာ ပြင်ဖို့ထောက်ခံမဲရ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အီတလီမှာ ခရီးသွားလာမှု ကန့်သတ် - BBC News မြန်မာ
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး ဘယ်လိုမဲပေးကြမှာလဲ - BBC News မြန်မာ
Friday Live: လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်မယ့် မိခင်တွေ ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေ ကြုံနေကြလဲ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဂယက် နဲ့ မြန်မာ့ စီးပွားရေး - BBC News မြန်မာ
ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ဘက်ပေါင်းစုံ ထိခိုက်နေတဲ့ မြောက်ဦး - BBC News မြန်မာ
ကိုအောင်ကြီးရှေ့နေ ကို တရားစွဲဆိုထားမှုရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ပယ်ချခံရ - BBC News မြန်မာ
မန္တလေးက ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ ရာသီပွဲတော်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရအဖွဲ့ ဘာပြောလဲ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အက်ပဲလ် အိုင်ဖုန်းလုပ်ငန်း ထိခိုက်နိုင် - BBC News မြန်မာ
မန္တလေးမှာ စောင့်ကြည့်လူနာ သေဆုံး - BBC News မြန်မာ
စစ်ဘေးကြောင့် စာမေးပွဲမဖြေရတဲ့ ရခိုင် စစ်ရှောင်ကလေးများ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အီတလီမှာ ကျောင်းတွေပိတ်လိုက် - BBC News မြန်မာ
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အီရန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုတွေ တိုးလာ - BBC News မြန်မာ
စင်္ကာပူက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းချုပ်မှု - BBC News မြန်မာ
တောင်ကိုရီးယားက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု - BBC News မြန်မာ
ရိုဟင်ဂျာအရေး မော်လ်ဒိုက် တရားဝင် ပူးပေါင်းမှု က ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိလဲ - BBC News မြန်မာ
တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယ ကြားက မြန်မာ ဘယ်လို အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေလဲ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စီးပွားပျက်ကြမှာကို စိုးရိမ်လာကြ - BBC News မြန်မာ
တရုတ်နဲ့ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ပြန်လည် လည်ပတ်စ ပြုလာ - BBC News မြန်မာ
ကိုဗစ် 19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်လာတော့မလား - BBC News မြန်မာ
လက်နက်ကိုင် တပ် အားလုံးရဲ့ အကြီးအကဲက ဘယ်သူဖြစ်သင့်လဲ - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အတွက် ပြင်ဆင်ထားဖို့ WHO သတိပေး - BBC News မြန်မာ
ပြည်တွင်း စစ်ကြောင့် တပြေးတည်း ပြေးနေရသူတွေ - BBC News မြန်မာ
ကျောက်တော်မှာ လက်နက်ကြီးကျည်ကျလို့ အရပ်သား ထိခိုက်ခဲ့ရပြန် - BBC News မြန်မာ
တရုတ်ပြည်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နှုန်း ကျလာ - BBC News မြန်မာ
တရုတ် နယ်စပ် ယာယီ ပိတ်ပေးဖို့ မြစ်ကြီးနားမှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကမ္ဘာတဝန်းကို ကူးစက်လာမှာ စိုးရိမ်နေကြ - BBC News မြန်မာ
KNU နယ်မြေထဲ ကားလမ်းဖောက်တဲ့ ကိစ္စ တပ်မတော် ဘာပြောလဲ - BBC News မြန်မာ
ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်က မြို့နယ်တွေမှာ အင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆို - BBC News မြန်မာ
အောင်ကြီး နစ်နာတဲ့ အတွက် ကုစားမှု ပြန်တောင်းဆိုမယ် - BBC News မြန်မာ
ပြည်တွင်းစစ် ဆိုးကျိုးဆက် ခံခဲ့ရတဲ့ နောက်ထပ် ကျောင်းသူလေး တစ်ဦး - BBC News မြန်မာ
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်၊ တရုတ် နဲ့ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး - BBC News မြန်မာ
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာ တာဝန်မကျေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို အရေးယူမယ် - BBC News မြန်မာ
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု ဥပဒေ ကြောင်းအရ ဘာတွေ လုပ်နိုင်လဲ - BBC News မြန်မာ
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု နောက်ဆုံး အခြေအနေ ဖခင်ဖြစ်သူ ဘာပြောလဲ - BBC News မြန်မာ
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု သမ္မတ ဘာ ညွှန်ကြားထားလဲ - BBC News မြန်မာ
ဂျာမနီမှာ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၉ ယောက် သေဆုံး - BBC News မြန်မာ
ဝူဟန်ပြန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လေယာဉ်မှူးကြီး ဦးခုပ်ခန့်မုံ - BBC News မြန်မာ
လမ်းမတော် သံစျေး မီးလောင်မှု ကိုယ်တွေ့ကြုံရသူတွေရဲ့ ပြောပြချက် - BBC News မြန်မာ
ဂျပန်မှာ ရပ်ထားတဲ့ သင်္ဘောပေါ်က ရောဂါမဖြစ်သူတွေ ထွက်ခွာ - BBC News မြန်မာ
koko suginami20 นาทีที่ผ่านมา
i don't understand what he say? so many BURMESE people they don't know how to speak BURMESE .So sad ...
Nwe Oo26 นาทีที่ผ่านมา
wai yan27 นาทีที่ผ่านมา
Cing Pi29 นาทีที่ผ่านมา
Shwe Lay58 นาทีที่ผ่านมา
yes''' We need.lock down..Myanmar Yangon''''
ေလာ့ေဒါင္းလုပ္မယ္ဆိုလဲလုပ္လိုက္ပါ ဒါေပမ့ဲကုန္ေစ်းႏုန္းကိုေတာ့ပုံမွန္ေလးအရင္လိုျပန္လုပ္ေပးေစျခင္တယ္ ေစ်းဝယ္ရတာအဆင္မေျပဘူးအကုန္ေစ်းေတတတ္ေနတာ
Abdul Raminwasabe2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Mainland Communist China government must be accountable for all the death and destruction. Thousands of innocent people's lives have been taken away from their loved-ones and damaging businesses worth trillions of dollars around the world. If Communist China hadn't covered up the pandemic, this SHIT might have prevented from spreading around the world. Cover up the pandemic is committing international crime.
Khaing thazin2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Minmin Aung2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
လေထဲက မဟုတ်ဘူးလေ အတိကျပြော
wuttyee lynn2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Christine Lim2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
kyawkyaw kyaw3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thaw tar win ko3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Kyaw Thura3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
kevin ching3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
soesan winn3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
အစိုးရဟာ ဘာမွႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာ ႐ွိပံုမရသလို၊ အေရးေပၚစီမံခ်က္လည္း လုပ္တတ္ပံုမရဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္မႈကို ျပည့္စံုလံုျခံဳေအာင္ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔မလုပ္ပဲ၊ lock down ဘက္လွည့္ေနတယ္။ အဲဒီအဆင့္ေရာက္ရင္ ေသခ်ာေပါက္ လုယက္တာေတြ သတ္ျဖတ္တာေတြျဖစ္မယ္။ ရိကၡာနဲ႔ အာဏာ တစ္ၿပိဳင္နက္ေပးမွ ရမယ္။
Owen Owen3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
အစိုးရက တိုက္တြန္းရုံ နဲ႔မရဘူး အမိန္႔ ထုတ္လိုက္သင့္ၿပီ ..အိမ္ျပင္မထက္ရအမိန္႔ ျမန္ျမန္ ထုတ္ပါဗ်ိဳ႕...ရိက္ခါမဝယ္ႏိုင္သူမ်ားကို ရိက္ခါ ေထာက္ပံ့ ေပးလိုက္ပါဗ်ိဳ႕...
Owen Owen2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
@MIN MIN .မသိလိုေမးတာလား ..သိရက္နဲ႔ေမးတာလား...သမတ ကဦးဝင္းျမင့္ပါ..ေဒၚစုက သမတရဲ႕ အထက္က ပါ..
MIN MIN3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
မသိလုိ့ေမပါရေစဗ်ာ အခုလက္ရုိ ျမန္မာျပည္မာ သမၼတဆုီတာဘယ္သူလဲ က်ေနာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္စုျကီေတြ႔ေနရလုိ့ပါဗ်ာ
Mc Paing3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ေလာင္ကိုင္ လို ျဖစ္ခ်င္ လား အားလုံး မသာေပၚကုန္မယ္
Lin Lin Soe4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ฉวี อินทร์ผล4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
maung maung Oo4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Myanmar Army has been controlling Myanmar since 1962 and it is lockdown too. Therefore, I think...no need lockdown .
.ระ.วัง..ข้า.ใน..มูงง...นอน.เอา.ครูม.หัว.ไว..ทรัม..ปิด.ไฟ...มา.กลับ.ไฟ.ฟ้า..ระวัง.วิง..2000 .ครวม.แร็ววว.คน.บ้า.หมด.โลก ปัน.ญา ออน.ไข.หวัด..ใหญ
.เกิน.ไป..ลูก..ใหญ.เกิน..ไคร..กาว..นอน.หยู.ใน.บ้าน..กาว...ลูก.โรง.มาชน ดัง.ตูบบบ..คน.บ้า.กัน.โลก..นอน..หมอบ โรก....กล้าง.มูง...นอน.ด้วย...55555
.ส้าง.ภาบ..แบบ.ภู..เขา..ไฟ...คน.กาว ..ภู.เขา.ไฟ...สี.แดง.เป็น.จู.ลอย..เป็นลูก..มา.ชน..บ้าน.ตาย.ส้าง.ระ.รัง.การ ตัว..โรก..เป็น.ตัว..นิว...จับ.ใส.กรั.สอบ
Sar Say4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lockdown လုပ္ေပးလိုက္ခဏေတာ့ခတ္ခတ္မယ္ လုပ္လိုက္ပါ
ကမၻာ ေက်ာ္5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
မလုပ္နဲ႔ ဒီအတိုင္းပဲ ႐ွိေနပါေစ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးထားပါ
Sai Min Kyie Lin5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Julia Lazum5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
စည္ပင္ဝန္ထမ္း ေတြကို ပိုၿပီးကာကြယ္ေပးရင္ေကာင္းမယ္ သူတို႔ကကူးစက္လြယ္တယ္လို႔ထင္တယ္.. ထိုင္းႏိူင္ငံမွာေတာ့ ခ်ိဳ႕တဲ့ ခက္ခဲတဲ့ အသက္၆၀ ျပည့္သူေတြကို သူတို႔ ေငြ ၂၀၀၀ လစဥ္ ေထာက္ပံ့တာကို ေတြ႕ရတယ္.
baby white5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Kyaw Thiha5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ကို ကို5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ကိုယ္​့ႏိုင္​ငံတဲ့ ႀကီးတဲ့ ႏိုင္​ငံ​ေတြ​ေတာင္​ စစ္​တပ္​ ႐ွိတယ္​ကြ နားလည္​လား ငါလိုးမ သား​ေတြ
တပ္​မ​ေတာ္​ကို စီးပြား​ေရး မလုပ္​နဲ႔လို႔ ​ေျပာတဲ့ လူ​ေတြ မင္​းတို႔ နင္​တို႔ ျပည္​ပ ပ​ေထြး​ေတြက ထမင္​း လာ​ေကြၽးမွာလားကြ တပ္​မ​ေတာ္​ ႐ွိလို႔ ဗမာ​ေတြ မ်ိဳး မသံုးတယ္​မွတ္​ ဒီ​ေလာက္​ ျပည္​ပ ႏိုင္​ငံ​ေတြ ကိုယ္​့ႏိုင္​ငံကို ႏွိမ္​​ေနတာ​ေတာင္​ အ႐ွက္​မ႐ွိၾကဘူးလား ငါလိုးမ သား​ေတြ သမီး​ေတြ
Shine Htet Aung6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Lock downလုပ်မယ်ဆိုရင်ရရှိလာမဲ့အကျိုးဆက်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ် ဒီအကျိုးဆက်ကိုလည်းပြည်သူတွေလက်ခံနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်
Cunglian Thang6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
KnEtizen PoP6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
လူတွေက lockdown လုပ်သင့်တယ် lockdown လုပ်ပေးပါ ထိုင်အော်နေတယ် Video က lockdown လုပ်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးဆက်ဖြစ်မလဲ ပြောပြနေတာကျ နားမထောင်ကြဘူး အရမ်းတတ်နေရင် အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ဝင်လုပ်ကြပါလား ? ဟုတ်သားပဲ ဝင်လုပ်ရအောင် လိုအပ်တဲ့ ပညာအရည်အချင်းမှ မရှိတာ pfff
Douglas Han6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
How would we to keep distancing6feet from the nearest person onabus.?
ass ess6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Limited Lockdown must start then full lockdown will compulsory finally because myanmar has nothing or not enough medical facilities and so lockdown is the best solution to stop spreading coronavirus
Veera Veera7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
100 လုပ်သင့် ပါတယ်
Sawzawmyo Saw zaw myo7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
အားလံုးေဒါင္ ့စံုကလ်င္လ်င္ျမင္တတ္ဖို့လိုတယ္ တရုပ္ဘယ္လိုလပ္သြားသလဲ ပံုတူေတာ ့မဟုတ္ကို ့နည္း ကို့ ဟန္နဲ ့ကိုက္ညီတဲ ့စနစ္တစ္ခုနဲ ့
Laldin Puii7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
အခုထိ မlockdown မလုပ္ ေသးတာ အံ့ဩပါ့ စစ္အစိုးရေတြက ျပည္သူေတြကို ဂ႐ုစိုက္တာမွ မဟုတ္တာ
Aung Aung Win8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Lock down pls
xy Z8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Taxi owner should reduce the rental fees
House owner should reduce their rental fees..
Win Htain Oo8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lock down လုပ်သင့်တယ် အခုချိန်မှမလုပ်ရင် လူတွေအကုန်သေကြမယ်
รักชีวิตตัวเอง มากกว่าคนอื่น8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ျမန္ျမန္ အကုန္းေသရင္နားေအးတယ္ အထူးသျဖင့္တာဝန္႐ွိတူေတြ ျပင္ပကေနျပန္လာတဲ့လူေတြကိုတခါထဲမစစ္ေဆးပဲဝင္ခိုင္းလို႔😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
Ohnmar Aye8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Nay Win8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
နိုင်ငံခြားက ကောင်တွေပဲ ဝင်ခွင့်ပိတ်လိုက်လေ နိုင်ငံကိုလည်း အကျိုးမပြု အများကိုလည်း အကျိုးမပြု။ အခုကူးတဲ့ကောင်တွေကြည့်လိုက် ပြည်တွင်းက တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ အဲ့တစ်ယောက်ကလည်း နိုင်ငံခြားက ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေစီကပဲ ကူးတာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ပြန်လာပြီး ဒုက္ခလာပေးတဲ့ကောင်တွေ။ ပြီးရင် နိုင်ငံကိုလည်း အပြစ်တင်ချင်သေးတယ်။ Lockdown ချမယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လောက်ကြာအောင် lockdown ချမလဲ သိဖို့လိုတယ်။ ဖြေဆေးဆိုတာက ရဖို့ လပေါင်းများစွာ ကြာအုံးမယ်။ အရင်ထဲက သူခိုးကြမ်းပိုး လုယက်သတ်ဖြတ်မူတွေက ဒီမှာ ခပ်များများနဲ့။ lockdown သာ ချလိုက်လို့ကတော့ ဘယ်သူမှ ကောင်းကောင်းနေရမှာကို မဟုတ်ဘူး အလုပ်လက်မဲ့တွေပိုပိုများလာမယ် စားဝတ်နေရေးပိုခက်ခဲလာမယ် အဲ့အခါကြ Corona ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ရာဇဝတ်မှုတွေကြောင့် လူတွေပိုသေလိမ့်မယ်။
Pyay Aye8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ကူးစက္​ႏႈန္​းျမန္​တဲ့​ေရာဂါပိုးျဖစ္​တယ္​ ကိုယ္​့ႏိုင္​ငံမွာ ဘာမွလံုလံု​ေလာက္​​ေလာက္​ ကုသဖို႔မ႐ွိတဲ့အတြက္​ lock down လုပ္​သင္​့ပါတယ္​ ျပည္​သူ​ေတြရဲ႕ စား၀တ္​​ေန​ေရးတြက္​ အစိုးရက ခုခ်ိန္​မွာ ကူညီ​ေပးသင္​့ပါတယ္​ lock down လုပ္​ဖို႔တစ္​ရက္​​ေနာက္​က်ရင္​ တစ္​ရက္​ကူးစက္​သြားႏိုင္​တယ္​ ျမန္​ျမန္​ ​ေလာ့​ခ္​​ေဒါင္​းခ်​ေလ ​ေကာင္​း​ေလပါပဲ ခုခ်ိန္​မွာ ​ေသ​ေရး႐ွင္​​ေရးထပ္​ ဘာမွအ​ေရႀကီးတာမ႐ွိပါဘူး
လုပ္ပာ အျမန္ဆုံးလုပ္သင့္တဲ့ ကာကြယ္မွု့ပါ ေနာက္ျကယင္ျပည္သူ ေတြ အျပုံျကီး ေသနုိင္တယ္ အီတလီ အျဖစ္မခံပါနဲ့
thathang kipgen8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဘယ်တုန်းက ဗမာစစ်တပ်က ချင်းတွေ အပေါ် ကောင်းခဲ့လို့ ရခိုင်တပ် AA ကို တိုက်မလို့လဲ။ အင်းစိန်တိုက်ပွဲ အပြီး ချင်းတပ်ရင်း ဖျက်သိမ်းခံရတာ သင်ခန်းစား ယူဖို့ကောင်းတယ်။ CNF should cooperate hand in hand with AA for his own cause but not with Junta.
rebeca phradan9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lock down လုပ္သင့္ပာတယ္
ko thu9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Sai aung htoo9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ကမ႓ာမွာ ျမန္မာဆိုတာ တန္းခိုးႀကီးတဲ့ နတ္ေတြေတာင္ေစာင့္ေရွာက္ရတဲ့ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးေတြပါတဲ့ Covid. 19 ဆိုတာႀကီးက မဝင္ႏိုင္ပါဘူး ရာသီဥတုကပူ ငပိရည္တို႔စရာင႐ုတ္သီးေတြ စားထားျကေတာ့ ေရာဂါပိုးကို ႏိုင္တယ္ေလ ပီးေတာ့ ရတနာ့သုတ္ပရိတ္က ေရာဂါေဘးကိုႏိုင္တယ္ဆိုပဲ ဘယ္ဂါထာကဘယ္လို ဘာအစီရင္က ဘယ္ေလာက္စြမ္းတယ္ ဆီေတြမန္းမႈတ္ၾကနဲ႔ အားကိုးရာေတြ အလူးအလဲရွာၾကတယ္ အမည္ခံေတြက အလကားေန အားအားယား အကုသိုလ္ဘက္ကို စိတ္ကူးေနၾကတယ္ ကို႔ကိုယ္ေစာက္ထင္ႀကီးၿပီး ဘဝင္ေတြျမင့္ေနၾကတယ္ သူမ်ားႏိုင္ငံကေသမ်ိဳး ျမန္မာကမေသမ်ိဳးေလ ၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေတြ ၂ လေလာက္ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီး ရတယ္ေလ ဘာလို႔အစီစဥ္ေတြေကာင္းကာင္း မလုပ္ႏိုင္ရတာလဲ ခံတပ္ကိုမတည္ေဆာက္ပဲ ဖြင့္ခ်႐ိုက္ခ်ိဳးထားတယ္ တႏိုင္ငံလံုး ေရာဂါက ကြက္ေစ့ျပန္႔ေနၿပီ ခုမွဝူးဝါး Lock down Show down ခ်မယ္ ဖြင့္မယ္ ဗ်ဴးတုန္း ဗ်ဲတုန္း အၾကံညံေတြေတာင္းခံၾကတုန္း ပဲရွိေသးတယ္ အားမရတာကေတာ့ စြခြက္ေတြႀကီးပဲ ႐ိုက္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြႀကီးပဲ ၊ ဒီကထိုင္းအစိုးရကိုင္တြယ္ပံုက တိက်ျပတ္သားတယ္ ဒီေလာက္ႏိုင္ငံျခားသား အဝင္အထြက္မ်ားတာကိုေတာင္ ေနာက္ထပ္မျပန္႔ေအာင္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီ ျမန္မာျပည္ကေတာ့ ဇယားရႈပ္ေနတုန္း ဟဟပဲ
Daw Khaingျမန္မာစာတန္းထိုးဆိုပိုေကာင္းမယ္9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Shwe Maung9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့ကို စောစောစီးစီး lockdown ချလိုက်ရင် အကောင်းဆံုးပါဘဲ။
Coronavirus is NOT airborne.
ใหม่ ใบไม้เขียว9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျမန္ဆန္ရမယ္ ျပတ္သားရမယ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႀကီးအကဲေတြအားလံုး အတၱေတြ ကိုခ်ၿပီးညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေဆာင္ရြက္ေစးခ်င္တယ္😍 စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်က္မမွားပါေစးနဲ႔အစိုးရရယ္🙅 ျမန္မာနိုင္ငံ ကိုခ်စ္တယ္ ျပည္ပေရာက္သူပါ😇😇😇
Aung Aung9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Dr Cho Cho Tint9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Yu Yu Win9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
aung nyein9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lock down yes
Sa Poh9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
လူကြောက်ခိုရိုနာ​ရောဂါ အသိရှိရှိရင်ဆိုင်ပါ ပါးစပ်စွတ်လက်အိပ်စွတ်တို့ အပြင်ထွက်ယူ​ဆောင်ကြစို့ အိမ်မှာပြန်လာ​ရောက်တိုင်းမှာ အမြဲတန်းလက်​တွေဆင်းပါ ကူးစက်ခိုရိုနာ​ရောဂါ မြန်မြန်​ပျောက်​အောင်ကန့်ကွက်ပါ
zaw ဆက္သာလုပ္ပါ9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thu YA9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
နောက် ကျနေပြီ Lock Dowလုပ်ပါတော့။
Khin Saw Lwin10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
စျေးတွေကိုတော့ တပတ်၂ ရက်လောက်ဘဲ ပိတ်ပြီး ပိုးသတ်ဆေး ဖြန်းသင့်တယ်လို့ ထင်ပာတယ်ရှင့် တော်ကြာစျေးထဲမှာပြုံနေမှာဆိုးလို့ပါရှင့်
Sapal win10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lockdown လုပ်သင့်ပါတယ် မလုပ်င်အီတလိနှင့်အအေရိကားလိုြဖစ်မှာကြောက်ရပါတယ်
min hla10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Lalit Kedia10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Look Down 1 00%လုပ်သင့်တယ်
ႏွင္းဆီ ေမ10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
locked down လုပ္သင့္ပါတယ္ျမန္မာႏိုင္ငံကိုမဟုတ္ရင္ဗိုင္းရပ္ပိုးကူးအံုးမယ္တစ္ႏိုင္လံုး
Songmyat Noe10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Why does Burma not force him to wearamask? 😷😷😷😷
Gokul4009 095005400910 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I think lock down is save for country
ကလောင် သွား10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Lockdown မလုပ်ချင်ရင် အရင်ဆုံး လူရုပ်မာ တရုတ်ဆီက antidose အရင်တောင်းလိုက် မြန်မာပြည်လဲသူ့လက်ခုတ်ထဲကရေဘဲ ထောင်မြင်လို့ရာစွန့်တဲ့ တရုတ်တွေ အမေရိကန်နဲ့ Europe ကိုဆော်ချင်လို့အကွက်ချတာအသိသာကြီး သူ့နိုင်ငံဒီလောက်လူဦးရေများတာ အီတလီလောက်ခံရလား အီတလီမှာအဓိကဖြစ်ခဲ့တာ တရုတ်ခရီးသွားတွေကြောင့်ဘဲ အခုအစု ရှယ်ရာ ဘီလီယံ ၂၀၀၀ ကျော် တရုတ်ဆွဲစိထားလိုက်ပြီ ဆက်စောင့်ကြည့်ပေါ့သူ့ရဲ့ယုတ်မာချက်တွေ
ကလောင် သွား8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
许永恒 ယဉ်ကျေးလှချည့်လား ဖင်ကွဲသွားပုံရတယ် အရင်းထိသွားရင်လဲ sorry ပါကွာ
Aung Hein11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
နိုင်ငံခြားကပြန်လာသူနဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်သူ သာ စစ် တော့ သူတို့ဘဲတွေ့မှပေါ့လေ
Ms. Plague Doctor4u11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I'm currently in Yangon, I give voice for lock down. I go outside and see that public transportation are crowded, especially YBS buses, most people are still going out without wearingamask. I see only2out of 10 are wearing mask. That's exactly how it all started in Hubei Province, China if you look back in 2019. Carelessness and lack of preparation. Yangon has over4million population (4,477,638 ) and will beahot spot for covid-19 outbreak in Myanmar should you not take care. Look at India for example, their PM Modi locked down entire country. I wish the best for Myanmar
roblox matt9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I agree with Ms. Plague Doctor4u. Take my country as an example. I am from Malaysia, the govt has no hesitance to initiate the lock down. Cases have gone lower day by day but for the cities that are in the red zone. Cases going low are the most important thing to do. We haveamovement control order to flatten the curve of the infections. This isagreat opportunity for countries with low cases so that the infections won't double up by night.
Ms. Plague Doctor4u9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
@Omprakash Parihar Ah, an Indian, I salute your country's PM Modi for taking this measure, sir. We need this as well. Waiting out 18 months is worse for national economy likeaslow decay and put more risk to the country's population if everyone is free to spread to whoever they may come into contact with. I salute UK's3weeks lockdown as well. This should be done in every country altogether at the same time for the virus to die out. The carriers will die peacefully in their own homes and we just need to thoroughly disinfect afterwards, the human civilization will continue to rotate
Omprakash Parihar9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I agree with Ms. Plague Doctor4u . Look at italy, lack of precautions put them in such conditions where they are discovering over 700cases daily
@Yree 4Treey 1. Secure the borderlands thoroughly in order to not have imported cases after3weeks lockdown 2. Providing every household with necessities for said lockdown period in order to not let non-infected ones to starve out to death 3. National-wide3weeks lockdown 4. After3weeks we must secure the homes of infected households with thorough disinfections. Provide masks to local population and resume local/domestic commerce 5. Limit entry from foreign nations 6. Disinfections must continue whilst waiting for vaccine to be made after 18 months 7. On every social media, there must be instructions for local population to follow
Ms. Plague Doctor4u10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
@Yree 4Treey I do believe that if every household in every city, town or village of every province of every nation would undergoalockdown foratotal of3weeks, the virus will be beaten without even vaccine which is promised to come after 18 months. That's 1 year and6months! There will be serious consequences to come should it be handled poorly. We do not want another Great Depression of 1930s. Look at UK's3weeks lockdown. The unfortunate ones who are already infected may die peacefully in their own homes without infecting the rest of the population by millions, we can disinfect such households afterwards. If there is no carrier, there is no one else for the virus to spread to. The virus will die out that way. Desperate times, desperate measures but in order to do that the Govt would have to provide each household with food, medicine and water to survive in said3weeks of them being on their own. If they are clean, they will live on as they're supplied with necesscities. This will strain poor countries' economy dearly no doubt, even so if this method is carried out, if Myanmar's borders aren't secure, infected fleeing from neighbouring infected nations could bypass the border illegally and repeat the cycle after3weeks lockdown
LaLar 150011 ชั่วโมงที่ผ่านมา
လုပ္သင္ ့ပါတယ္ lock down ျမန္ျမန္လုပ္ရင္ပိုေကာင္းပါ္တယ္
King of Sunshine11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Should be lockdown.
႐ွင္းသန္႔ေမ ႐ွင္းသန္႔ေမ11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
႐ွင္းသန္႔ေမ ႐ွင္းသန္႔ေမ5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
@Sai aung htoo ေနာက္ၾကတယ္ေျပာေန အိပ္ေနတာၾကာပီးအိမ္မက္ထဲျပန္သြားတာၾကာပီ
Sai aung htoo8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
နန္းေမထူး လံုလံုျခဳံျခဳံ ေနျခင္ရင္ နီးလဲနဂါးျပည္ျပန္ေနပါ 😁 ငါလဲ လံုလုံျခံဳေနဖို႔ ဂဠံဳျပည္ကို ျပန္ေတာ့မယ္ 😁 ဟိုမွာက စိန္ေရႊေငြ ေက်ာက္သံ ျပတၱျမားေတြ ရွိတယ္ ေပ်ာ္စရာလဲေကာင္းတယ္ ေဘးအေပါင္းမရွိဘူး ဤလအုျပည္မွာက ေဘးအႏၲရာယ္ ရန္စြယ္ေတြကမ်ားဒယ္ ခ်စ္ႏွမတို႔ေလ😉😁😁
Htay Htay8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Geeta Bosnet11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Vocal Lway11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ma San11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Ko Pyan12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ကူးဆက္ခံရျပီးသူသည္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာေအာင္ေနျပီး အသက္ဆံုးပါးနုိင္သနည္း။
Saw Wah12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
တရုပ်ဆီမှာဆေးရှိနေပြီ သူထုပ်ထားတဲ့ပိုး ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲသူသိတယ်......
MARKCUS TEE12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thank. You. Ok. Zaya
komyint song12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ko soe13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
yin kyi13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ေရာဂါကင္းေၾကာင္း အေထာက္ထားက ေငြေပးရင္ လုပ္လို႔ လြယ္လြယ္ေလးရယ္ပါ ျဖစ္သင့္ လုပ္သင့္တာက လုံးဝပိတ္ပစ္တာပဲေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ
Win Thaung14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
နွားဂွေးသင်းတဲ့ဒေါက်တာနဲ့တူတယ်။သတ်မတော်ဆိုတာနဲ့သူခိုးဒါးမြမုဒိန်းလူသတ်ဟောက်စားမြေသိမ်းလယ်လုအိမ်မီးရှို့တို့လုပ်တဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်။ပြည်တွင်းမှာတောင်အေအေကိုဖင်ခံနေရတာ ဝနဲ့မိုင်းလားတောင်မထိရဲတာ။စောက်ရူးအလံရှူးကိုခေါ်ပြီးအာချောင်ခိုင်းသလိုဖြစ်နေတယ်၊တကယ်တော့မိမှားသတ်မတော်အဆင့်က ထမိန်ခိုးဘိန်းရှူတဲ့ဘိန်းစားထက်ပိုနိမ့်နေတယ်။
Isksksusj Jsjshzh14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
သူဇာ ဘီဘီစီကိုနားထောင်ကြိုက်လာတာငယ်ငယ်ခ လေးဘဝထဲကပါရှင့်ေးဇူးတင်ပါသည်ဘီဘီစီရှင်အမြဲတမ်းအါး ပေးနေမယ်ရှင်ဤ သူဇာ
tun tun14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
thiha kyi15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
BBC , where did you get this Dr, Please tell her to go to front line instead of talking.
nyi nyi15 ชั่วโมงที่ผ่านมา